Ubuchwepheshe Be-TOFRE Heat Herbal Sticks - Sichuan King Continental Blotechnology Co. Ltd.
Isisekelo Socwaningo Nokuthuthukiswa sochungechunge lwemikhiqizo ye-TOFRE konke kusekelwe ekhonweni eliqinile lelabhorethri yethu lokuqamba emisha yemithi.Inhloso yokuqala yomkhiqizo wethu ukuhlanganisa ubuchwepheshe bemithi ekhishwe ezitshalweni zemvelo, nomuthi wamaphaphu ukuze kwakhiwe indlela enempilo yokubhema kwababhemayo.
Ubuchwepheshe be-TOFRE Heat Herbal Stick
I-TOFRE Heat Herbal Stick iwumkhiqizo omusha sha wamakhambi wokushisisa, esiwudalela ababhemayo (Ukushisa-ukungashi).Uma kuqhathaniswa nenduku kagwayi ye-HNB, i-TOFRE Heat Herbal Stick isungula ifomula enempilo ye-herbal fuse izinga lobuchwepheshe lokunambitha ugwayi yenze ibe ifaneleka ekubhemeni futhi ibe nempilo.
Ithimba lethu eliphezulu le-Flavour liqukethe ama-flavourists angu-18 avela ezindaweni ezihlukahlukene : iqembu liqukethe abathandi bokunambitheka okumnandi abaye basebenza ezimbonini zikagwayi, izinkampani ezinambitheka ugwayi, izinkampani zetiye njll. Intuthuko yeminyaka nokuqonda okuyingqayizivele kwalo lonke uhlobo lukagwayi emhlabeni kunikeza i-TOFRE Heat Herbal Sticks. ithuba lokubuyisela izinti zikagwayi ezidlula i-HNB.Izinambitheka zethu ezintathu zasekuqaleni ziyaqanjwa futhi zethulwe ngokulandelana kwazo ezicini “zikagwayi olaphelwe ngokufutheka”, “Osikilidi be-flavour ehlanganisiwe” kanye “nogwayi we-flavour yaseMpumalanga.”
Isakhiwo sezinto zokusetshenziswa zamakhambi ahlanzekile + i-nicotine yemvelo + ukuqhuma kwezinga likagwayi kuletha i-TOFRE impumelelo evelele yokunciphisa ukulimala okungama-95%, kodwa ukunambitheka kwakudala okuyingqayizivele.
Ngemuva kokuqeda ukuqhuma, uzoqala uhambo oluhle lokubhema, futhi uthole ukunambitheka okungcono kwezinti zikagwayi ze-HNB....shush!Lona umlingo womkhiqizo we-TOFRE.Futhi futhi I-TOFRE Heat Herbal Stick ingashintshwa ngokuphelele kuzo zonke izisetshenziswa zokushisa emakethe.
Isakhiwo se-TOFRE herbal stick sithathwe kumgomo wethu we-honeycomb wemvelo wemvelo Ngokuhlanganisa indlela "yesakhiwo seStick", "microwave", "microbiology", "amakhemikhali okudla", "i-low-temperature puffing" ubuchwepheshe.
Inzuzo eyinhloko yesakhiwo sethu ukuthi sinciphisa ubungozi bokubangela ukusabela kwamakhemikhali okungadingekile ezintweni ezingavuthiwe, okwenza i-TOFRE igcine ukunambitheka kwasekuqaleni kwefomula yethu yemithi ngokwezinga eliphezulu.
Isakhiwo sekhekheba lezinyosi se-TOFRE esakheke ngokwemvelo, esixegayo&esijwayelekile sivumela ukushisisa ukuthi kube nokulinganisela futhi ngeke kuwise noma iyiphi i-slag kudivayisi.Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe besakhiwo be-TOFRE bungathuthukisa ukusebenza kahle kokudlulisela ngokufudumeza, okulethela i-HNB isipiliyoni sokubhema esibushelelezi.
Ingabe i-TOFRE Heat Herbal Sticks inamaqabunga kagwayi?
I-TOFRE Heat Herbal Stick ayinazo izithako zikagwayi.Umuzwa wangempela wokubhema usekelwe kufomula yezithako ezingamakhambi ezingu-100%, kodwa ngobuchwepheshe be-flavour kagwayi obamukelwa ama-flavourist ethu, kanye ne-nicotine yemvelo ukunikeza umuzwa wokubhema ngezinga elikhulu kakhulu.
Uma kuqhathaniswa nenduku kagwayi oshisayo, i-TOFRE Heat Herbal Stick enezithako zamakhambi ahlanzekile iyinketho enempilo yokubhema.
Ingabe i-TOFRE Herbal Sticks iqukethe iNicotine?
I-Nicotine iyinto encike kakhulu kubo bonke ababhemayo, kwa-TOFRE, ngeke siyekethise ku-nicotine.Ngakho-ke, sihlinzeka ngomkhiqizo wokubhema ngokwaneliseka okuphezulu, ukunambitheka okuhle kakhulu nobungozi obuphansi.Uma kuqhathaniswa nogwayi wendabuko, sehlise ubungozi ngo-95% ngendlela encomekayo.
Yiziphi izithako ze-TOFRE Herbal Sticks?
Izithako ze-TOFRE Herbal Sticks ZONKE ZISEKELWE EMITHOMBINI YEMVELO NEPHEPHILE, izithako ezingezansi:
Iyiphi i-HNB Heat Device engasebenza ku-TOFRE Herbal Sticks?
I-ULTRA-MICROCELLULAR Herbal TECHNOLOGY ka-TOFRE HERBAL Stick ekhethekile isivumela ukuthi sijwayelane nawo wonke amadivayisi okushisa avamile emakethe.Ngesikhathi esifanayo, maduze sizokwethula idivayisi ekhethekile yokushisa ye-tofre ye-TOFRE.